မနက် မနက် အလုပ်သွားတိုင်း၊ သုတ်သုတ်၊ သုတ်သုတ်နဲ့ လမ်းမြန်မြန်လျှောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုကျော်တက်သွားတဲ့ ဂျပန်တွေကိုမြင်တိုင်း အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာ တွေးမိတာတစ်ခုကတော့ "ဂျပန်တွေ အလုပ်ကို တော်တော်ချစ်ကြပါလားလို့..."
ကိုယ်က အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ အလုပ်မသွားချင်သွားချင်နဲ့ အလုပ်ကို ဦးတည်နေတဲ့အချိန်မှာ၊ သူတို့ကတော့ ဘာဖြစ်လို့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ အလုပ်ဆီ ဦးတည်နေကြသလဲဆိုတာ ကျွန်တော် စဉ်စားလို့မရခဲ့ပါဘူး။
မနေ့က အလုပ်ကလူကြီးတစ်ယောက် အသက်၆ဝပြည့်လို့ ပင်စင်ယူတယ်။အလုပ်ကလူတွေပေါင်းပြီး အဲ့ဒီလူကြီးအတွက် နှုတ်ဆက်ပွဲလေးတစ်ပွဲ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပင်စင်ယူမယ့်လူကြီးက သူ.. ဒီကုမ္ပဏီမှာ အနှစ်၄၀တိတိ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာတော့ ဂျပန်တွေ တော်တော်အလုပ်လုပ်နိုင်တာပဲလို့ စဉ်းစားနေမိတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့... ကိုယ်ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်တာ ၁၀နှစ် မပြည့်တပြည့်တောင်မှ၊ တော်တော် သည်းခံပြီး ကြိုးစားနေရတယ်။အနှစ်၄၀ဆို ဘယ်လွယ်ပါ့မလဲပေါ့...
ကျွန်တော့ဘေးနားက ဆံပင်ဖြူဖြူနဲ့ ဂျပန်ကြီးက ကျွန်တော့ကို.....
"မင်းအသက်ကဘယ်လောက်လဲ?.. မင်းဘယ်နိုင်ငံကလဲ?..အလုပ်လုပ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ..?" စသည်ဖြင့်မေးခွန်းတွေမေးပြီး မိတ်ဆက်လာတယ်။
သူနဲ့ကျွန်တော် စကားတွေ အပြန်အလှန်ပြောနေရင်းနဲ့ သူ့အကြောင်းတွေ တော်တော်များများ မေးဖြစ်ခဲ့တယ်။
သူလည်း ဒီကုမ္ပဏီမှာ ၄၃နှစ်တိတိ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ မနှစ်ကမှ ဒီကုမ္ပဏီကို ပင်စင်ယူခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်က "မင်းတို့လူမျိုးတွေ အလုပ်တော်တော်လုပ်နိုင်တာပဲနော်လို့ပြောတော့"
အဘိုးကြီးက ရယ်နေပြီး "ငါမနှစ်က ဒီကုမ္ပဏီမှာ ပင်စင်ယူပြီး အခုတစ်ခြားတစ်နေရာမှာ အလုပ်ဆက်လုပ်နေတယ်တဲ့။
ဘိုးဘွားရိပ်သာတွေမှာ အသက်၈၀ကျော်တဲ့ အဘိုးအဘွားတွေကို ဂီတာတီးပြီးလိုက်ဖျော်ဖြေတဲ့အလုပ်တဲ့.."
သူ့စကားကိုကြားတော့ ကျွန်တော်လည်း ပိုအံ့သြသွားတယ်။
"မင်း.. လတိုင်းလတိုင်း ပင်စင် ၁၅သိန်း၊ သိန်း၂၀လောက်ရနေတာပဲ၊ အလုပ်လုပ်စရာလိုသေးလို့လားလို့မေးတော့.." ဂျပန်အဖိုးကြီးက ဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်...
"အလုပ်ဆိုတာ.... ဝင်ငွေရဖို့တစ်ခုတည်းအတွက် လုပ်ရတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။
အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်နေထိုင်နေတဲ့ လောကကြီးအတွက်နဲ့၊ အများအကျိုးအတွက်၊ ကိုယ်တတ်တဲ့အရာ၊ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့အရာကို လုပ်ပေးရတာပါတဲ့..."
အဲ့ဒီလို စကားပြောနေကြတဲ့ အချိန်မှာပဲ၊ ပင်စင်ယူမယ့် ဂျပန်ကြီးရဲ့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း နှုတ်ဆက်စကားက မိုက်ကနေတဆင့် ကျွန်တော့်နားထဲကိုဝင်လာပါတယ်။ "ပင်စင်ယူပြီးတဲ့အခါ၊ မိမိဝါသနာပါတဲ့ စားသောက်ဆိုင် အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ရင်း "ဒုတိယဘဝ" ကို စတင်မယ်.."ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ကြားလိုက်ရတော့....
ဘာကြောင့် အသက်ကြီးတဲ့အထိ အလုပ်လုပ်ကြတာလဲ..!ဆိုတဲ့ အဖြေကို ကျွန်တော်ရရှိလိုက်ပါတယ်။
အလုပ်ဆက်ကြိုးစားဖို့ ခွန်အားတွေလည်း ကျွန်တော် ရရှိလိုက်ပါတယ်။
သင်လည်း အလုပ်တွေအရမ်းပင်ပန်းပြီး၊ အလုပ်ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားမိတဲ့အခါတိုင်း....
ဂျပန်က အဖိုးကြီးတွေကို အတုယူပြီး၊ ခွန်အားတွေရယူလိုက်ပါ။
Credit : အကီ
Bestjobmyanmar.com © 2016 All Rights Reserved.